Bermuda World Rugby Classic dia mankalaza ny fitoviana sy ny fampidirana fehin-kitroka avana
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Bermuda World Rugby Classic dia mankalaza ny fitoviana sy ny fampidirana fehin-kitroka avana
Vaovao Mafana Bermuda • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Zon'olombelona • LGBTQ • Vaovao • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Tao anatin'ny andro vitsivitsy monja dia niverina nody tany Bermuda indray ny sain'izao tontolo izao mba hankalazana ny faha-30 taonan'ny World Rugby Classic - ary hankalazana ny fitoviana sy ny fampidirana eo an-kianja.
Hatramin'ny taona 1988, ny anarana malaza amin'ny rugby iraisam-pirenena dia nitodi-doha nankany Bermudes ho an'ny World Rugby Classic, iray amin'ireo hetsika nahaliana indrindra tamin'ny kalandrie fanatanjahantena an'i Bermuda. Mpankafy an'arivony maro avy any Bermuda sy manerantany no indray mankafy herinandro iray amin'ny rugby iraisam-pirenena, hetsika ara-tsosialy ary rivo-piainana tsy manam-paharoa amin'ny lalao.
Ny tsy fitoviana amin'ity taona ity? Sambany ny ekipa rugby Irlandey Legends no hisalotra kiraro kiraro avana handefasana hafatra fitoviana, fanatanjahan-tena ary fampidirana izay misy dikany manokana amin'ny fianakavianana olom-pirenena OUTBermuda sy Bermuda LGBTQ.
Raha niresaka momba ny OUTBermuda i Adrian Hartnett-Beasley, dia nilaza hoe: "Rehefa mihalehibe dia tsy tokony hisy sakana amin'ny fanatanjahan-tena mifototra amin'ny fironanao ara-nofo - ny olona rehetra dia ao anatin'ny lalao, ao anatin'izany ny zaza sy fianakaviana LGBTQ rehetra. Voninahitra ho anay ny miara-miasa amin'ny World Rugby Classic mba hampandraisana anjara ny rehetra amin'ny fanohanana ny fitoviana LGBTQ. Izaho manokana, amin'ny maha olon-dehibe nihalalina ny rugby tany Bermuda sy tamin'ny fampirantiana ho an'ny tanora tao amin'ny Classic, dia faly aho amin'ny maha-gay gay any ivelany fa ny fahasamihafana sy ny fampidirana dia ekena bebe kokoa ary hamafisina ao Bermuda. Ny fisintahana dia mety toa zavatra kely tokony hatao, nefa misy fiatraikany maharitra ho an'ny mpankafy fanatanjahantena sy mpilalao rehetra. Raha olona iray monja no voan'ity hetsika ity, dia nahita fahombiazana. ”
Ronan Kane, talen'ny hetsika, World Rugby Classic, dia nilaza hoe: “Fanatanjahan-tena mampiavaka ny Rugby. Amin'ny fanatanjahantena hafa dia ho hitanao ny olona 160 kilao manandrana miatrika olona 260-pounds! Fanatanjahantena ho an'ny endrika sy habe rehetra izy ary iray izay manaiky ny fahasamihafana ary mampiroborobo ny fampidirana. Ny World Rugby Classic dia mirehareha manohana ny hetsika LGBTQ ary mino tanteraka fa ny olona rehetra dia noforonina mitovy, na milanja 160 pounds na 260 pounds, na mahitsy na pelaka ary na inona na inona firazanana na miralenta. Ny fanahin'ny rugby dia mandrisika fiaraha-monina mitovy lenta kokoa ho an'ny olona rehetra ao Bermuda sy manerantany. ”
Nisy solontena Irlandey Legends nanampy hoe: “Ny atleta tsirairay avy dia tokony hifaninana amin'ny fahafantarana ny vintana azon'izy ireo rehefa mitondra ny tenany feno amin'ny lalao izy ireo. Raha ireo kofehin-kiraro ireny dia mitaona fanantenana ary manova ny fo sy saina, na dia ny kitrokely kiraro tsotra aza dia fandresena ho an'ny zon'olombelona sy ny fanekena. "
Sean Field-Lament, filohan'ny fikambanan'ny rugby Football Bermuda, dia nanome toky ny fanohanan'ny BRFU mafana fo koa, tamin'ny fanamafisany hoe: "Ny BRFU dia manolo-tena hanohana ireo hetsika izay mampihena ny asan-dahalo, mampiroborobo ny fahasamihafana ary ny fampiraisana. Misokatra sy mandray tsara ny rehetra ny fanatanjahantena Rugby, anisan'izany ireo ao amin'ny fiarahamonina LGBTQ. Mankasitraka ny asa tanteraky ny OUTBermuda izahay ary manantena ny hahita ireo fehin'ny avana eny an-tsaha ary hiara-hiasa amin'izy ireo amin'ny ho avy. ”
Inona: Rainbow Laces dia tonga amin'ny World Rugby Classic, Hamilton, Bermuda
Aiza: Bermuda National Sports Center, Devonshire, ivelan'i Hamilton
Rahoviana: 2:15 hariva, Alahady 4 Novambra 2018 fihaonana eo Irlandy sy France
Maninona: Amin'ny fandraisana an'ity hetsika ity amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena malaza indrindra any Bermudes, World Rugby Classic, Irish Legends ary ny Bermuda Rugby Football Union dia miaraka amin'i OUTBermuda handefa an'izao tontolo izao ny hafatra fa ny rugby dia fanatanjahantena tafiditra ao am-pivoaran'ny toetra amam-panahy. soatoavina amin'ny filàna, tsy fivadihana, firaisankina, fanajana ary fifehezana - ho an'ny rehetra.